उतिबेलाको दशै- हेमराज अधिकारी( सिक्किम) -
१७ आश्विन २०७७, शनिबार ०७:१८ हिमवत्खण्डLeaveaComment on उतिबेलाको दशै- हेमराज अधिकारी( सिक्किम)
उतिबेलाको दशै- हेमराज अधिकारी
नवरात्रि शुरु हुनु अघि देखी ताइचुङ,माइली धानको चिउरा आधा रातिदेखि ढिकिको ठङ-ठङ ठङ आवाज साँच्चिकै दशै आएको आभास हुन्थ्यो । फलानोले भुटेको धानको चिउरा कस्तो दामी हुन्छ भनेर गाउँनै हल्लिन्थ्यो हल्लाले । कमेरो र रातो माटो लेकको सिद्विचोकदेखि दिन माया मारेर गाउँ भरिका बलिया बाङ्गाहरुले ओसारपसार गर्ने चलन प्रायः सबै नेपाली -गोर्खालीको घरमा थियो,कमेरो,रातो माटोले माटो भाग पोत्ने अनि बिमको भागमा थोत्रे ब्याट्री कुटेर लाउने गाउँवासीमा रोचक परम्पराले साच्चिकै दशै आउथ्यो । अहिलेका बिल्डिङमा जन्मेका नानीहरूलाई यो प्रसंग दन्ते कथा हुनेछ । गाउँमा कमेरो खन्ने खोपोमा खन्दाखन्दै माथिको भाग लडेर मान्छे पुरेको र कोहि कोहिलाई हतारपतार तान्नु परेको अनि कोहिचै पुरिएर मरेको प्रसंग समेत सुनिन्थ्यो । हरियो गोबरले भुइँ लिपिन्थ्यो,अगेनो,चुलो,भर्सेली,आट,मजेरी रातो माटोले लिपपोत गर्ने दशै अब आउनै छाड्यो नेपाली ,गोर्खालीको । प्रत्येक पल्ट फर्सिको सब्जी काट्दा भित्रको बियाँको धुलो अचार दशैंमा ज्वाइचेलालाई चाहिन्छ भनेर गाउँ भरि फिलुङ्गे र खड्कुँडा्मा पकाएको भक्मिलोको अमिलो,अदुवा,तीलको अचार,च्वाप्प घिउमा भिजाएर मसिनो अट्टेको भात,भुइँमा पलैंटि मारेर कस्तो खाइन्थ्यो,कस्तो दशै मानिन्थ्यो ।
गाउँमा लिङ्गे पिङ खेलिन्थ्यो । म पनि पिङबाट धेरै पल्ट झरेको छु । दशैमा बाबाले अदुवा-अलैंची,फापर बेचेर ल्याएको दशैको लुगाफाटोले साच्चिकै दशैको रौनक ल्याउथ्यो । लुगाफाटो साथिहरु भेला गरेर देखाउने औ तेरो भन्दा मेरो राम्रो भनेर साथीहरूको मन खिन्न बनाउने,साथिको घरमा झगडा मच्चाउने,दुइ चार दिन बोलचाली बन्दाबन्दी गराउने दशै अब कहाँ आउला र.. ? दशैमा दही -मोही भएको घरमा पाहुनाको भिडभाड हुन्थ्यो । सोह्र श्राद्व देखी गाउँमा केरा खोज्न जाने,अनि केराको बैना अगावै दिने दशै अब हरायो । टिका जमरा लाएर मान्नेगुन्नेको मेलै संग खुट्टा ढोग्ने दशै अब हरायो धेरै । कोलमा बारिकै सरसों तेल पेल्ने दशै -तिहार हरायो धेरै । ज्वाइ चेला बाहिर जादा बाहिरै राडि, भित्र जादा भित्रै राडि, बोक्ने बाबा हजुरबुबाहरु बितेर गए धेरै । बाबा- हजुरबुबाले तरितुज्ज पुर्याएको दशै अब हरायो धेरै । आमा संग थुन्सेमा कोसेली पात बोकेर खुर्मी भिरेको थुन्से बोकेर माइत -मावल गएको दशै जस्तो अहिलेको भौतिक सुखले भत्भती पोलेको, सबकुछ भएर पनि एक्लो एक्लो भएको दशै पनि अब आउन लाग्यो ।
रुपैया पैसाको कमि छैन कसैलाई अहिले । दुनियाँमा जति जनसंख्या बड्यो त्यति एक्लो हुदै जादैछ मान्छे । दशैमा लाखौं खर्च गरेपनि भ्यालु लेस हुदैछ मान्छे र उसले मनाएको दशै । आखिर मान्छे कहाँ चुक्यो त ? के अहिलेको देखावटी आडम्बर र रेडिमेड संसारले हो त ? हुनेखानेको दशै भन्दा हुदाखानेको दशैले रौनक ल्याएको छ अहिले पनि । प्रत्येक बाबा हजुरबुबाहरुको पालोमा समाज समानान्तर थियो होइन र ? इगो लेस सोसाइटी थियो उतिबेला । हरेक घर घरमा समानान्तर दशै आउथ्यो उतिबेला । अहिलेको बासमती बजारे चिउरा र इन्जेक्सनले पकाएको केरा घरभरी ल्याउदा समेत उतिबेलाको रौनक ल्याउन सक्दैन । तर परम्परा अक्षुण रुपमा रहनुपर्छ । ढिकि जाँतो कसको कसको घरमा छ त अहिले ? आधुनिक घरहरुमा उतिबेलाको रौनक आउन सक्दैन भन्ने मेरो अभिप्राय मात्र हो । उतिबेलाका हरेक औजार र परम्परा,बाँच्ने जिबन शैली कति निस्वार्थ र निर्दोष थिए ।
धनिले शोषण गरेर मनाएको दशै भन्दा गरिबले खाइनखाइ कमाएको दशैले रौनक ल्याउछ समाजमा । हुनेखानेका छोराछोरीले लगाएको हजारौंको महङ्गो लत्ताकपडा भन्दा बाबाले अदुवा बेचेर ल्याइदिएको कमिज र पेन्टले रौनक ल्याउछ दशैमा । तर जसरी होस यि चाड पर्व हामीले मनाउनु पर्छ । आउदै गरेको दशै महामारीको दशै हो । टाढाबाट आउजाउ गर्न नमिले पनि घर परिवार संगै बसेर निस्वार्थ र उल्लासमय दशै मनाउ । सबै सबैमा अग्रिम शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु 🙏❤️
के हो त नेपालमा ‘कोरोना जन्तर’को नामबाट चर्चा चुलिएको जन्तर ?
१३ असार २०७७, शनिबार ११:५४ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता